Star Wars: Qeybta IX waxay soo saartaa Qodobka Rasmiga ah ee rasmiga ah - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM Star Wars: Qeybta IX waxay soo saartaa Teaser Official
Ma jiri doono kaliya Ragaha: Endgame ee filimka 2019. Dhammaadka sanadka, waxaan sidoo kale xaq u yeelan doonnaa Star Wars: Qeybta IX. Dhacdadii ugu dambeysay ee sadexaad ayaa la soo bandhigay cinwaan iyo teaser ugu horeysay.
Ka hor dhamaadka sanadka, taageerayaashu waxay ku degdegayaan si ay u arkaan qolalka mugdiga ah Star Wars: Qeybta IX - Rise of Skywalker. Si loo dabaaldego dhawaaqa iyo dhammaadka caleemaha sida ay tahay, waxaa ugu horreyntii internetka lagu dhejiyey.
Star Wars: Heerka IX - Kacsanaanta Skywalker ayaa soo bandhigaysa teaser ugu horeysay
Sida caadiga ah, teeseraha su'aasha waxay na siinaysaa macluumaad aad u yar. Waxay muujinaysaa sida uu Rey u kobcayo, aqbalayo doorkiisa Jedi. Finn, Poe, Kylo Ren ayaa sidoo kale soo bandhigay muuqaalo kooban, sida muuqaalka waxa u eg sawirka dhimashada. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh si loo arko doorka xiddigga dhimashada ee ka ciyaara tartanka Star Wars.
Star Wars: Dhacdada IX calaamadee dhamaadka Forbrydelsen hadda, Forbrydelsen ah in uu ahaa halkii ay gaabis ah si ay u horumariyaan iyo in, qaar ka mid ah, waxay maamushaa inay iska ilaawaan isku day hore si ay u abuuraan prequel ah. Dhaleeceyn ilaa maanta arrin wanaagsan yihiin, gaar ahaan dadweynaha, farxay in ka badan waa in ay leeyihiin filimada wareejin-off sida anshaxa xun One iyo Solo in ay ku riday afkooda.
Booqo Diseembar si aad u ogaato dhamaadka sadexaad
Star Wars: Heerka IX - Rise Skywalker ayaa loo qorsheeyay 18 2019 Diseembar. Hal taariikh dheeraad ah si aad ugu calaamadiso ajandahaaga haddii aad xiiseyneyso.
Waraysiga Loogu Talagalay: Jedi Fallen Order si loo soo bandhigo April marka dhacdada shatiga
Video: markasta oo ciidanku ka muuqdo filimka Star Wars
Star Wars 9: JJ Abrams waxay soo gebogebeeyeen dhammaadka burka
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/star-wars-episode-ix-devoile-son-premier-teaser-officiel-312779
Khaas ahaan: 4 X, 199 7, 385 209, Amazon Echo Show 2 €, 249 XNUMX Pro laga bilaabo € XNUMX